Ciidamada Dekeda Bosaso oo Hay'adda UNODC kala Wareegay Labo Laash | SAHAN ONLINE
Ciidamada Dekeda Bosaso oo Hay’adda UNODC kala Wareegay Labo Laash
Ciidamadda ilaaladda dekeda Bosaso ayaa maanta kala wareegay Hay’adda qaramada midoobay u qaabilsan ka hortega dambiyadda ee UNODC labo doonyood oo ah nooca dheereeyee, taasi oo loogu talagalay in lagu horumariyo amniga dekeda iyo shaqada ciidamadda.
Doonyahan oo lagu soo bandhigay dekeda Bosso waxaa adeegsan doono ciidamada Dekeda oo sanadihii la dhaafay tababaro kala duwan ku soo qaatay dalka jabuuti iyo markiibta midowga yurub ee ilaaliya xeebaha Soomaaliya.
” Labadan doonyood ee maanta la soo wareejiyay waxay ka mid ahaayeen mashaariic hay’adaasi ay ka wado dekeda Bosaso, waxaan ka mid ah dhismaha cusub ee casriga ah ee laga dhisay dekeda, baabuur lagu wareejiyay dekeda iyo mashaariic kale oo weli dhiman” sidaas waxaa horseedmedia u sheegtay Agaasimaha Wasaaradda Dekeda Cabdimajiid Samatar Jaafaan.
New boats arrived to #Bosasso #Puntland to support Port Police operations – #UNODC MCP mentors are ready to assemble & carry out sea trials pic.twitter.com/vYJDygNc2Q
— UNODC MCP (@UNODC_MCP) July 29, 2017
Dekeda Bosaso waa isha dhaqaale ee ugu weyn ee dakhli ahaan ay ku tiirsan tahay dowladda Puntland ee Soomaaliyeed, waxaana lagu tilmaamaa dekedaha ugu amniga wanaagsan Soomaaliya, iyadoo sanadkii oo dhan furan.
Barlamaanka Puntland ayaa toddobaadkii hore ansixiyay heshiis ay dowladda Puntland ay la gashay shirkadda DP world oo muddo 30 maamuli doonto dekeda magaaladda Bosaso, waxaana lagu samayn doono ballaarin iyo dayactir.